Izindaba - Izinzuzo Eziyisithupha Nezizathu Zokuqala Ukudla Ibhotela Lamantongomane
Ukusabalala kwamantongomane okuthandwa kakhulu okuzoletha ushintsho oluhle ekudleni kwakho ibhotela lamantongomane. Yenziwe ngamakinati omisiwe futhi agazingiwe futhi ifakwa njalo eqenjini lokudla okunempilo. Igcwele izakhamzimba ezilusizo empilweni yakho inqobo nje uma uyithokozela ngokulinganisela. Inezinhlobonhlobo zezinzuzo zezempilo ongase ungazi ngazo!
Kuthuthukisa impilo yemisipha nemizwa
I-Magnesium yisakhi somzimba esibalulekile esilawula ukuphendulana kwamakhemikhali emzimbeni, ibhotela lamantongomane lingumthombo ofanele walo. Iqukethe cishe i-12% magnesium yokunconywa kwansuku zonke okunconywayo. Lokho kusho ukuthi izipuni ezimbili kuphela zaleli bhotela elimnandi ezingathuthukisa impilo yakho. Kungakusiza ekugcineni uhlelo lwemizwa oluphilile, amathambo namazinyo aqinile, izinga lokushisa lomzimba elijwayelekile, namazinga aphezulu wamandla. Ngaphandle kwalokho, ibhotela lamantongomane lingaphinde lithuthukise amazinga akho e-serotonin azoholela ekulaleni okungcono.
2. Kunciphisa Ubungozi Bokufa Ngaphambi kwesikhathi
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukunikezwa kwamakinati nsuku zonke kuyasebenza ekunciphiseni ubungozi bezimbangela eziningi zokufa, ikakhulukazi ukufa kwenhliziyo. Ziqukethe amafutha e-polyunsaturated acebile ngama-antioxidants alusizo empilweni yenhliziyo. Lezi zinhlanganisela zinganciphisa nomfutho wegazi ophakeme futhi zikujwayele.
3. Ibeka amazinga okucindezeleka ngokwejwayelekile
Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukudla okunothe emafutheni afana ne-peanut butter kune-beta-sitosterol engasiza ekunciphiseni amazinga e-cortisol, i-hormone ekhishwa uma unengcindezi. Kwesinye isikhathi ungazizwa unesifiso sokubamba umthamo ophakeme emafutheni omzimba ukulinganisa lawo mazinga e-cortisol. Kulezo zimo, ibhotela lamantongomane kungaba yisinqumo esifanele. Amazinga ayo aphezulu amafutha agcwele anempilo nawo asizakala ekuthuthukiseni amasosha omzimba.
4. Kukhulisa Amazinga Amandla
I-peanut butter ingenye yalezo zidliwayo ezingakhuphula amandla akho ngoba iyindlela enhle kakhulu yamaprotheni. Lawo maprotheni nemicu akuwona nje umthombo wamandla amangalisayo, kodwa futhi ayasiza ekulinganiseni amazinga kashukela egazini lakho.
5. Silwa Ukukhuluphala
Yize ibhotela lamantongomane linamafutha amaningi, aqukethe ama-calories ayi-100 kusipuni esisodwa, izifundo zikhombisile ukuthi zingakusiza futhi ekunciphiseni isisindo. Ukudla okuqukethe amazinga aphezulu amafutha agcwele, njengalawo atholakala kumakinati, kungasiza abantu ukunciphisa isisindo futhi kuvimbele nesifo senhliziyo. Iqukethe ne-genistein, isithako esisiza umzimba ekwehliseni amafutha agciniwe.
6. Kuthuthukisa impilo yeBongo
Amantongomane angazuzisa impilo yakho yobuchopho ngenxa ye-vitamin E, i-zinc, i-magnesium, ne-niacin equkethe. Bangabuye bathuthukise inkumbulo yakho namakhono okuqonda, okuhle kakhulu kubantu asebekhulile. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi luyasiza nasekuvikeleni isifo i-Alzheimer's. Ngakho-ke, ayikwenzi nje ukuba uhlakaniphe kakhulu, kepha futhi ivikela nengqondo yakho esikhathini esizayo. Futhi kuwukudla okumnandi kogogo bakho nogogo!
Izingane Amabhisikidi, Amaphakethe Esoso Soy, I-Hawthorn Strip, Ikhukhi leLadyfinger, Induku entsha ye-Bean Curd, Ukudla Amakinati Anosawoti,